प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण किन विगतको भन्दा पृथक ? – rastriyakhabar.com
प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण किन विगतको भन्दा पृथक ?
काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो नेपाल भ्रमण राजनीतिक, धार्मिक र पर्यटकीय दृष्टिले विगतको भन्दा पृथक बन्न पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैत २३ देखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्नुुभएको थियो ।
नेकपा ९माओवादी केन्द्र० का विदेश विभाग सचिव युवराज चौलागाईंका विचारमा उच्चस्तरको भ्रमणका क्रममा आपसी सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने अवसरका रुपमा हेर्नुपर्ने जनाउँदै नेपालको नयाँ राजनीतिक स्थितिमा यो भ्रमणको दीर्घकालीन महत्व रहने टिप्पणी गर्नुभयो ।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदी यसअघि २०७१ साउन र मंसिरमा नेपालको भ्रमणमा आउनुभएको थियो । त्यसबेला उहाँले संसदलाई सम्बोधन गर्नु पनि भएको थियो । उहाँले अहिलेको भन्दा बढी स्वागत, सत्कार र आतिथ्यता पाउनुभएको थियो । – प्रकाश सिलवाल ररासस